Zlatan Ibrahimovic oo Afrika ka sameeyey arrin ay dad badani ka xumaadeen & saxaafadda oo ku dheggan + Sawirro | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Zlatan Ibrahimovic oo Afrika ka sameeyey arrin ay dad badani ka xumaadeen...
Zlatan Ibrahimovic oo Afrika ka sameeyey arrin ay dad badani ka xumaadeen & saxaafadda oo ku dheggan + Sawirro
(Stockholm) 06 Maarso 2021 – Laacibka Sweden iyo AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic ayaa lagu eedeeyey oo libaax ku toogtey dalkanhas South Africa sanaddii 2011 deetana uu xitaa soo qaatay maqaarkiisii, qalkiisii iyo dhakadiisii.
Qannaaskan qawaarka ah oo caan ku ah inuu libaax isku tilmaamo marka uu kaftamayo, ayaa falkan waxaa aad ugu cambaareeyey kooxaha degaanka u dooda ee dalkiisa Sweden.
Warqaadka Swedish-ka ah ee Expressen ayaa ku eedeeyey Ibrahimovic inuu qaatay laysinka ugaarsiga kaddibna uu wax sanad ka yar toogasho ku diley libaax lab ah oo ku jira kaymaha Koonfur Afrika.
Kaaga darane libaaxa oo Ibra diley ayaa ka mid ahaa libaaxyada naadirka ah ee ka mid ah gacalooyinka dabar go’i raba, sida ay qabto hay’adda bay’ada u doodda ee Conservation of Nature Red List of Threatened Species.
Koonfur Afrika ugaarsigu waa sharci haddii uu qofku sito shati sax ah, balse Expressen oo baaris ku sameeyey ugaarsi ay sameeyeen 82 qofood oo Swedish ah ayaa ogaadey in libaaxa uu Ibrahimovic toogtey uu meel xannaano ah ku xirnaa muddo sanad ah kahor intaan duurka lagu sii daynin.
Ibra ayaa deeto raqdii libaaxa aan ka harine waxyaabo badan kasoo qaatay oo Sweden la yimid, isagoo haatan diidey inuu wargayska uga warramo wixii dhacay.
Previous articleTOOS u daawo: Real Madrid vs Liverpool, Man City vs Borussia Dortmund – LIVE (Shaxda Sugan)
Next article“Gurigiisa ayaan ugu tegi balse wuxuu igu bilaabay dhaqan xumo & rakaato” – Gabar dhib kala kulantay nin xiriir kala dhexeeyey & sida ay ku dhameeyeen Booliiska Muqdisho